Pfungwa dzeB | Yekutanga kupinza mune yakasarudzika nyika
Pamusoroi guruva redu! Iyo MoB blog inogadzira zvimwe kugadzirisa iwe uchitsvaga!
Chii chinonzi Super Introvert?
Kuroora & Kudanana
Hutano & Kuzvitarisira
Wellness & Kurwara
Yakamonana Bvudzi Kuchengeta
Kurarama uye rudo seyakaipisisa introvert uye empath mune yakasarudzika nyika
Kutsvaga Chinhu? Tsvaga chero chinhu uye rova ​​pinda.
Kungogara Kuroora uye Kufambidzana
Mid-30s, Mukadzi, Mumwechete uye Anotyisa
Chinhu chekupedzisira chandanga ndichida kuita kutangazve bhurogu yangu ine rant pamusoro peimwe blog. Asi pandakaona iwo musoro wenyaya yeVogue.com yakagovaniswa paTwitter mavhiki mashoma apfuura, mabhisikiti angu akapiswa zvakanyanya. “Ndakava Sei Munhu Wekupedzisira Kuroora Muboka Rangu?” Aka, “Mid-30s uye Asina Kuroorwa: Ndakamirira Kwakareba Kuti…
Hutano hwepfungwa uye hwepfungwa Super Introvert
Pasi Mazuva uye Maitiro Ekuita Navo
Zvinopera pasina kutaura. Ndinovenga pasi mazuva. Ndeapi mazuva epasi? Mazuva akaderera inguva idzo iwe dzaunopinda mumusoro wako pachako pamusoro pechinhu chisina basa uye kupusa. Pamwe wakanganwa chimwe chinhu kuchitoro, uye ikozvino wave kunonoka kumafaro. Kana pamwe shamwari haina kukufonera iwe pawakanzwa kuti waida yavo…
Chinhu Chikuru Chikuru
Chinhu Chikurusa CHESE # 1: GreenBeauty
Gore rakapera, mumoyo wekugadzwa kweka COVID-19, ndakaongorora kupfuura nakare kose zviwanikwa zvepamhepo zvekuchengetwa kwebvudzi rechisikigo. Kuva pamba zvirokwazvo kwakandipa iyo imwe nguva yekuita kudaro, uye ndaiziva kuti handisi ndega. Shamwari, mhuri, vatinoshanda navo, maforamu epamhepo – angangoita murimi wese-wekurima wandanga ndichiziva nezvake vafunga kurega kukiya kwavo kukura zvishoma ...
Kufungidzira & Satire
Kuunza iyo Blog Kudzoka (aka Goredzva Rakanaka!)
Kwazisai, mose, uye kufara, Goredzva Rakanaka! Ini ndinofunga isu tese tinogona kubvumirana kuti hatisi kunyanya kuodzwa moyo kuona 2020 ichienda. Asi ndiani anoziva - pamwe vamwe vedu tiri. Ndinoziva kuti tese tine shungu dzekuisa mazuva ekupedzisira mazana matatu nemakumi matatu neshanu kumashure, asi kuti tione kuti tinorangarira kuti nei tichitenda zvikuru kubuda kwegore idzva,…
Pfungwa dzeB dzeKutora Rimwe Basa Kuitwa – Zvakare
Ndiri kuzoita izvi nekukurumidza uye zvine tsvina. Sevazhinji, isu tese tanga tichipfuura mugore rimwe chete kusvika gore ra2020. Ini pachangu, ndinogona kungofungidzira zvauri kusangana nazvo- uye nekunzwa, pamusoro pezviitiko zvese. Kana ndiri ini, rave riri cacophony yepfungwa, yemanzwiro, uye yepanyama roller machira evazhinji ...
Hutano hwepfungwa uye hwepfungwa Kufungidzira & Satire
Ndinoshuva Kuti Zvikara Zvimire
Kwehusiku hwechipiri mumutsara, zvakaitika. Panguva ino, ini ndaive ndakamira mukicheni mangu ndichibvunza paGoogle Imba yangu kuti ndainyatsochengeta sei nyama mbishi pane tembiricha yemukati mabhakitiriya asati atanga kukura. Iyo nguva iyo inodakadza, yeruzhinji yambiro alarm yakadambura nepakati yakavharika skrini ye smartphone yangu payakagara mumba yekutandarira, ini…
Zvakasikwa Zvinongedzo Bvudzi Rangu HATES (Rako Rinogona, Nawo)
Zvakanaka, zvakanaka - saka ichi hachisi chinonakidza kana chinesimba blog positi kuti idzoke mukuyerera. Izvo, zvakadaro, zvinonyanya kukosha kwandiri izvozvi. Munguva ino nguva yekugara pamba zvinobatsira kune zvese kwandiri uye nekune vamwe vanhu, ndine nguva yakawanda yekufungisisa nezvenzira yandiri kurarama. Shamwari dzangu nemhuri vari…
Hutano hwepfungwa uye hwepfungwa Kungogara
Happy International Zuva reVakadzi !!!
Ndinoda kufunga kuti Nguva Yemasikati Yekuchengetedza Nguva yaingove shungu sesu tese kuti titange zuva rino rakanaka - nhasi uno uko (kunyangwe tichifanira kuupemberera zuva rega rega) tinopemberera vakadzi kwese kwese. Semukadzi, ndagara ndichinetseka nehunhu hwangu - ndiko kuti, ndingaite sei mukadzi akanakisa wandingave? Ndinoedza here…
Kuroora uye Kufambidzana
Nzira Dzatinofambidzana Nadzo
Ndinokuda sei? Rega ndiverenge nzira. Elizabeth Barrett Browning Ini ndaifanira kunge ndakaziva kare kuti zvinhu zveupenzi chete zvinoitika na11 o'clock husiku. Kwandiri, ndanga ndichiedza kupedzisa chigaro chemambokadzi-chakakura-mubhokisi-mubhokisi nemusuwo wangu wepamberi, apo ndakamirira imwe yeshamwari dzangu kuti iuye nekubva kubasa uye kundibatsira…
2020: Gore reSarudzo uye Shanduko
Dzvanya apa kuti uende wakananga kune yangu 2020 "Nyowani Nyowani"! Icho chizaruro chinonakidza kuti uzive kusvika mukukura kwako kuti wakanyanya kusachinja, hunhu-huchenjeri, kubva pawakanga uri mwana. Dai iwe waive wakatsvinda semwana mudiki, zvakasikwa uchiisa matoyi ako kure mushure mekutamba, iwe ungangove uchiri kuwana kutapira kunakidzwa mukuchengetedza iyo hutsanana mune yako…
Kugamuchirwa kuMind of B
Ini ndinonzi Brandee. Ini ndiri munyori, freelance proofreader, uye anoda izwi mutambi. Ini zvakare ndiri munhu anonzwisisa zvakanyanya, ane tsitsi, uye introvert yemhando yepamusoro.
Iyi blog inorondedzera mafaro angu uye kunetsekana kuwana hupenyu semukadzi mumwechete weAfrica-America ane chido chekugadzira, hutano hwepfungwa, uye kutarisirwa kwebvudzi rechisikigo, ndichigara pachokwadi kune yangu "super introversion".
Kuve Super Introvert
Ayurveda uye Bvudzi Rangu Regimen
Dai 20, 2012
FictionKufungidzira & SatirePakunyora
5 (Yakanaka) Literary Classics Pasi peMapeji mazana maviri
Kufungidzira & SatirePakunyoraSuper Introvert
Kuderera Kwekuva Vanhu Mucherechedzi
KungogaraKuroora uye Kufambidzana
Maitiro Ekuzvichengeta Iwe Pachezvako Kubva Pupenzi Pamusoro peKupwanya
Yechinguva-Yekuyeuka (Archives) Select Month Ndira 2021 (2) Chikumi 2020 (2) Chivabvu 2020 (1) Kurume 2020 (2) Ndira 2020 (1) Mbudzi 2019 (2) Gumiguru 2019 (4) Nyamavhuvhu 2019 (5) Chikunguru 2019 (2) Chikumi 2019 (2) Chivabvu 2019 (3) Ndira 2019 (4) Zvita 2018 (3) Mbudzi 2018 (3) Gumiguru 2018 (2) Nyamavhuvhu 2018 (5) Nyamavhuvhu 2018 (4) Chikunguru 2018 (3) Chikumi 2018 (2) Chivabvu 2018 (3) Nyamavhuvhu 2017 (2) Nyamavhuvhu 2016 (1) Chikunguru 2016 (1) Chivabvu 2016 (1) Kubvumbi 2016 (1) Nyamavhuvhu 2015 (3) Kurume 2015 (2) Nyamavhuvhu 2014 (1) Chikumi 2014 (1) Kubvumbi 2014 (2) Kurume 2014 (1) Ndira 2014 (1) Mbudzi 2013 (2) Gumiguru 2013 (7) Kukadzi 2013 (1) Ndira 2013 (1) Gumiguru 2012 (1) Nyamavhuvhu 2012 (7) Nyamavhuvhu 2012 (6) Chikunguru 2012 (1) Chikumi 2012 (1) Chivabvu 2012 (3) Kubvumbi 2012 (1) Kurume 2012 (2) Kukadzi 2012 (6) Zvita 2011 (1)
Kutsvaga kwekutanga kunyora kukurudzira uye zvinyorwa zvine chekuita nebhuku? Dzvanya mufananidzo.
kutya kufara (4) kutya kunyora (5) vakadzi vasina murume vasina murume (3) ayurvedic bvudzi regimen yevanotanga (4) kuva munyori (6) kuva munhu ari nani (7) kufara (10) kuchengetwa kwebvudzi kwakamonana (6) kubata nemanzwiro (9) kubata neruvengo (4) Ita vanhu vanondifarira (3) Pasi mazuva (3) kunyora pachena (7) bvudzi 4c (8) bvudzi kukura matipi evhudzi rechisikigo (4) introvert yakanyanyisa (5) ndingafare sei (5) ndingaite sei kuti ndiwedzere kurara (3) Ndinoda vhudzi rangu (5) Ndinoda kunyora (13) kufemerwa kunyora (3) iri kunyora zvakaoma (4) Ndinoda kufara (3) rudo rwakarasika (3) rudo mutauro bvunzo (3) Ida iyo blog (7) pfungwa b (19) ndasuwa rudo (3) bvudzi rechisikigo (10) zvigadzirwa zvebvudzi zvakasikwa (3) rugare rwepfungwa (5) silence (14) mukadzi mutema asina murume (3) sunday drive (4) kukudza kukuru (9) uya akatiza (3) kuyedza kugadzirisa zvese (4) ndinombokura bvudzi refu (3) munyori block (6) mushonga wemunyori (4) munyori block block (3) munyori block block (3) kunyora (7) kunyora kwandiri (9) kunyora kukurumidza (8)
Tora zvitsva mumabhokisi ako enguva ivo pavanoburitsa kune saiti!
Nditevere pa Instagram!
© Copyright 2022 Pfungwa dzaB. All Rights Reserved. Blossom Pin Pro | Yakagadzirwa Na Kutumbuka Themes. dzinofambiswa ne WordPress.